गौतम बुद्धका उपदेश ! - NepalKhoj
गौतम बुद्धका उपदेश !
नेपालखोज २०७८ असोज २६ गते ५:०३
घृणा र ईर्ष्याको आगोमा जलिरहेको यो संसारमा खुसी र हाँसो स्थायी हुन सक्दैन । यदि तपाईं अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं किन उज्यालोको खोजी गर्नुहुन्न । यो एक हजार वर्षका लागि ध्यानबिना अभ्यासभन्दा, जीवनमा एक दिन समझदारीसँग बाँच्नु राम्रो हो । तपाईं तपाईंको क्रोधका लागि दण्डित हुनुहुन्न, तपाईं तपाईंको क्रोधद्वारा दण्डित हुनुहुन्छ ।
जसरी मैनबत्ती आगोबिना बल्न सक्दैन, त्यस्तै गरी मानिस आध्यात्मिक जीवनबिना बाँच्न सक्दैन । जसरी आँधीबेहरीले बलियो ढु्ंगा सार्न सक्दैन, महान् मानिसहरु प्रशंसा वा आलोचनाबाट प्रभावित हुँदैनन् । मैले कहिल्यै देखिनँ कि के भएको छ, म मात्र यो देख्छु के गर्न बाँकी छ ।
मृत्युले विचलित मनलाई उस्तै ढंगले बगाउँछ जसरी एक गाउँ बाढीले बगाउँछ । राम्रो स्वास्थ्यमा शरीर राख्नु एक कर्तव्य हो, अन्यथा हामी हाम्रो दिमाग बलियो र सफा राख्न सक्षम हुने छैनौं । एकजना जंगली जनावरभन्दा एक कपटी र दुष्ट साथीबाट धेरै डराउनुपर्छ, किनकि एक जनावर मात्र तपाईंको शरीरलाई हानि गर्न सक्छ, तर एक नराम्रो साथीले तपाईंको बुद्धिलाई बिगार्न सक्छ । क्रोधलाई दबाएर राख्नु भनेको कोइलालाई अरु कसैलाई फ्याक्ने नियतले समातेर राख्नु जस्तै हो, यसले तपाईंलाई जलाउँछ ।
एक मूर्ख व्यक्ति, एक समझदार व्यक्तिको साथमा बस्ने, एक चम्चा सुपको स्वादको आनन्द लिँदैन जस्तै गरी आफ्नो जीवनको बाँकीका लागि सत्य देख्न सक्दैन । उहाँले मलाई अपमान गर्नुभयो, मलाई चोट दिनुभयो, मलाई लुट्नुभयो, ती मानिसहरु जो जीवनभर यी कुराहरुको बारेमा गुनासो राख्छन्, उनीहरु कहिल्यै शान्तिमा बस्न सक्दैनन् । केवल ती मानिसहरु शान्तिपूर्वक बाँच्न सक्छन्, जो आफैंलाई यी चिजहरुभन्दा माथि उठाउँछन् ।
जो व्यक्ति रिसाएका बेला उसको रिसलाई सम्हाल्न सक्छ एक कुशल ड्राइभर जस्तै हो जो एक छिटो चलिरहेको वाहन सम्हाल्न सक्छ र जो यो गर्न सक्दैनन्, बस दुर्घटनाको लागि पर्खेर आफ्नो सिटमा बसे हुन्छ । यदि व्यक्तिले गल्ती गर्दछ, यसलाई दोहोर्याउने कोसिस नगर्नुहोस् । यसमा खुसी पाउन कोसिस नगर्नुहोस्, दुष्टमा डुबेको कारण दुः ख निम्त्याउँछ । सबै नराम्रोबाट टाढा रहन, राम्रो खेती गर्नुहोस् र आफ्नो दिमागमा राम्रो विचारहरु राख्नुहोस् । सत्यको बाटोमा हिँड्दा दुई गल्ती हुन सक्छ ।